Logos aingam-panahy avy amin'ny hetsika ara-javakanto: Blaxploitation sinema | Famoronana an-tserasera
Logos aingam-panahy avy amin'ny hetsika hetsika: sinema blaxploitation
Ary nandeha tamin'ny art deco ka hatramin'ny zavakanto fahafito izahay mba hijanona amin'ny iray amin'ireo revolisiona kanto izay nisy fiatraikany lehibe indrindra. Ilay miralenta Blaxploitation na amin'ny fitrandrahana mainty, hetsika iray nivoatra tany Etazonia tamin'ny taona 1970 ary ny axis centrale dia ny fitakiana fitoviana sy ny ady amin'ny fanavakavahana ara-poko. Izy io dia fiteny iray izay naneho ny fisondrotan'ny film noir tsara ary misy endri-javatra amin'ny ambaratonga rehetra: na amin'ny mozika, na amin'ny visual, na amin'ny sehatra. Anisan'ireo mampiavaka azy voalohany ny fahitana ny fiandohan'ny endrika mainty, mozika funk, toerana an-tanàn-dehibe ary ny fanangonana ireo zana-tsokajina fanararaotana isan-karazany toy ny sexploitation, stoner na fitrandrahana hatairana.
Ity taompolo ity dia lasa vanim-potoana volamena an'ny sarimihetsika Afrikanina Afrikana ary natosiky ny fitomboana lehibe teo amin'ny lafiny demografikan'ny olom-pirenena mainty. Samy nanorim-ponenana tany Etazonia ny mpanakanto sy ny besinimaro ary tamin'izany fomba izany no nandro ny fiarahamonina, ny indostria ary ny hetsika estetika. Ary tamin'ny taona 50 tany ho any na dia namela ny hidiran'ny mpilalao sarimihetsika mainty aza ny indostrian'ny sarimihetsika, dia saika navotsotra tamin'ny andraikitra faharoa izy ireo tamin'izany fotoana izany dia nisy karazana ghetto (antsoina hoe sarimihetsika hazakazaka) izay namoronan'ny artista mainty horonantsary nikendry amin'ny mpanatrika mainty. Efa tamin'ny taona 60 ny hetsika sosialy mainty (notarihan'ny Black Powers voalohany ary taty aoriana ny tapaky ny taona 60 an'ny Black Panthers) dia nanolotra ho fampidirana blaxploitation.
1 Fampisehoana mivantana
2 Endri-javatra tsara indrindra: Blaxploitation amin'ny endrika sary
Fiampangana mafy amin'ny fomba maro: Tsy isalasalana fa io karazana io dia taratry ny fisehoan'ny fivoarana ara-tsosialy sy andiana fifandonana izay nandalo ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Tsy isalasalana fa hetsika nisy refy lehibe satria tamin'ny alàlan'ity karazana ity dia nahita maso ny premiere ny sary sy ny foto-kevitra izahay. Ny vondrom-piarahamonina Afro-amerikanina dia nivoaka tamin'izao tontolo izao vonona haneho filozofia vaovao ary ambonin'izany anarana vaovao izany, ary tamin'ny fomba maro dia nampiasa ny kanto, ny indostria ary ny toe-javatra ara-tantara nipoitra tamin'izany fotoana izany izy.
Izy io dia teraka tamin'ny fomba hafa mandra-pahatonga azy ho lasa zavatra goavana: Blaxploitation dia teraka tamin'ny fisehoan-javatra tsy miankina sy ambanin'ny tany eo am-pelatanan'ny ghetto irery sy marginal. Saingy, io dia nopotehina tamin'ny lafiny sasany tamin'ny fomba iray mba hampihena ny fahasamihafana ara-poko mba hanomezana fiaraha-miasa eo amin'ny mpanakanto sy ny mpandraharaha avy amin'ny firenena samy hafa mba handefasana hafatra vaovao sy vaovao ary hitrandrahana ny endrika ara-barotra vaovao an'ny foko iray vao tafiditra. ny fiaraha-monina sy ny mazava ho azy dia nifanaraka tamin'ny tanora an-tapitrisany maro. Nisy zavatra teraka teo an-tsisiny ary natsangan'ny teti-bola ambany dia nahavita lasa hetsika be dia be ary namelombelona ny sary Hollywood teo imason'izao tontolo izao.
Endri-javatra tsara indrindra: Blaxploitation amin'ny endrika sary
Na dia nitaky fatratra teo amin'ny sehatra ara-tsosialy aza ity ony ity, dia marina fa io fangatahana io dia tsy voafetra ho an'io refy io fotsiny, fa ny mifanohitra amin'izany dia niampita fetra na lafiny maro hafa mandra-pahatongany tany amin'ny haavo zavakanto. Tamin'ny fotoana nanjakan'ny famolavolana sary tamin'ny alàlan'ny famaritana soatoavina toy ny fahombiazana, minimalism ary ambonin'izay rehetra mavesatra azo ampiharina sy miasa, Blaxploitation dia toa te hohenoina ao anaty ranomasina misy fombafomba sy fisoratana anarana voafetra. Ny iray amin'ireo fitaovam-piadiana tsara indrindra nampiasainy dia ny fampandrosoana fiteny hita maso azy manokana izay nanana toetra tena mahaliana, ny iray amin'ireo Maxim dia ny fampiasana haingon-trano miravaka, miolakolaka ary manaitra. Hita ao amin'ny endritsoratra amin'ny endriny mazava be. Ireo rehetra na ny ankamaroan'izy ireo dia misafidy ny hatsarana, ho an'ny be ranony, ny manaitra ary manohintohina amin'ny fikatsahana ny minimalism na ny ara-dalàna aza. Amin'ny lafiny iray dia tsy te ho takatra izy ireo, na farafaharatsiny tsy amin'ny fitenin'ireo mpandala ny nentin-drazana radical rehetra na amin'ny rafitra iray izay nahatonga azy ireo ho ambaratonga sosialy ambany indrindra. Nanana zavatra holazaina sy amin'ny fiteniny manokana izy ireo ary eo ambanin'ny mason-tsain'izy ireo manokana.
Amin'ny teny maso, ny fampiasana ny vahaolana loko mahasarika maso, fisaka ary indrindra ny fampiasana palety mifanohitra izaitsizy izay nanome rivotra ho an'ny tanora sy ny dia.
Ho fanampin'izay dia misy koa mazava ho azy kapoka boribory Retro ary ny fiotazam-boaloboka ho toy ny effets saturation ambany na sary fisaka.
Avy eo avelako amina afisy maromaro amin'ity fironana mahaliana ity ianao ary koa miaraka amin'ireo logo vitsivitsy misy ireo fiasa ireo. Ankafizo izy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Logos aingam-panahy avy amin'ny hetsika hetsika: sinema blaxploitation
Fomba fijery an-tery an'i Jamie Harkins momba ny fasika